Konke malunga ne-cryptocurrencies: Bitcoin, Ether, Litecoin, .. ICOs, ukurhweba
Konke malunga ne-cryptocurrencies: Bitcoin, Ether, Litecoin, ...
I-Bitcoin, i-Ether, i-Litecoin, i-Monero, i-Faircoin… sele ziyinxalenye yembali yoqoqosho lwehlabathi. I-Blockchain, i-wallet, ubungqina bomsebenzi, ubungqina be-Stake, ubungqina beNtsebenziswano, izivumelwano ezihlakaniphile, i-atomic swaps, inethiwekhi yombane, i-Exchanges, ... isigama esitsha seteknoloji entsha, ukuba siyayityeshela, siya kusenza sibe yinxalenye yodidi olutsha. yokungakwazi ukufunda nokubhala 4.0.
Kule ndawo sihlalutya ngokucokisekileyo ubunyani be-cryptocurrencies, siphawula ngezona ndaba zibalaseleyo kwaye sibonisa ngolwimi olufikelelekayo zonke iimfihlo zehlabathi zemali ephantsi kolawulo, iteknoloji ye-block chain kunye nawo onke amathuba aphantse angenamkhawulo.
1 Yintoni iBlockchain?
2 Yintoni i-cryptocurrency?
3 Ii-cryptocurrencies eziphambili
4 Izipaji okanye iipaji
5 Yintoni imigodi?
6 Ii-ICO, indlela entsha yeeprojekthi zokuxhasa ngemali
I-Blockchain okanye ikhonkco leebhloko yenye yezona teknoloji ziphazamisayo kwinkulungwane yama-21.. Umbono ubonakala ulula: oovimba beenkcukacha ezifanayo basasazwe kuthungelwano olunatyisiweyo. Nangona kunjalo, isiseko se-paradigm entsha yezoqoqosho, indlela yokuqinisekisa ukungaguquki kolwazi, ukwenza idatha ethile ifikeleleke ngendlela ekhuselekileyo, ukwenza loo datha ingabinakutshatyalaliswa kwaye ikwazi ukwenza iikontraki ezihlakaniphile. imiqathango izalisekiswa ngaphandle kwempazamo yomntu. Ewe kunjalo, kunye nedemokhrasi imali ngokuvumela ukudalwa kwee-cryptocurrencies.
I-cryptocurrency yimali ye-elektroniki ekhutshwa, ukusebenza, ukuthengiselana kunye nokhuseleko lubonakaliswa ngokucacileyo ngobungqina be-cryptographic. I-Cryptocurrencies esekelwe kwitekhnoloji yeBlockchain imele uhlobo olutsha lwemali ephantsi ekungekho bani unegunya phezu kwayo yaye inokusetyenziswa njengemali ebesiyazi ukuza kuthi ga ngoku ngeengenelo ezininzi. I-Cryptocurrencies inokufumana ixabiso elithenjiswa ngabasebenzisi, ngokusekwe kubonelelo kunye nemfuno, ukusetyenziswa kunye nexabiso elongezelelweyo loluntu oluzisebenzisayo kunye nokwakha inkqubo yendalo ebangqongileyo. Ii-Cryptocurrencies zilapha ukuze zihlale kwaye zibe yinxalenye yobomi bethu.
I-Bitcoin yayiyeyokuqala i-cryptocurrency ukuyilwa kwi-Blockchain yayo kwaye, ke ngoko, yeyona yaziwa kakhulu. Yathathwa njengendlela yokuhlawula kunye nokudluliselwa kwexabiso ekulula ukuyisebenzisa, ngokukhawuleza, ekhuselekileyo kunye nexabiso eliphantsi. Ekubeni ikhowudi yayo ingumthombo ovulekileyo, inokusetyenziswa kwaye iguqulwe ukwenza ezinye ii-cryptocurrencies ezininzi kunye nezinye iimpawu kwaye, rhoqo, kunye nezinye iingcamango kunye neenjongo ezinomdla. Litecoin, Monero, Peercoin, Namecoin, Ripple, Bitcoin Cash, Dash, Zcash, Digibyte, Bytecoin, Ethereum… zezinye zazo kodwa kukho amawaka. Ezinye ziqhagamshelwe kwiiprojekthi ezinamabhongo angakumbi anxulumene nobuchwepheshe obutshintsha indlela esiqhuba ngayo ulwazi, idatha kunye nobudlelwane boluntu. Kukho nezo zikhutshwe ngoorhulumente, njengesisombululo esityholwa kwiingxaki zabo zoqoqosho, ezifana nePetro ekhutshwe ngurhulumente waseVenezuela kwaye ixhasa ngoovimba bayo be-oyile, igolide kunye nedayimani. Eminye yimali yeentshukumo zentsebenziswano yendalo echasene nongxowankulu kunye nokwakha imo yezoqoqosho eguqukayo ukuya kwinto abayibiza ngokuba lixesha longxowankulu, njengeFaircoin. Kodwa kukho okungaphezulu kweengcinga zoqoqosho malunga nee-cryptocurrencies: iinethiwekhi zentlalo ezivuza awona mnikelo ubalaseleyo nge-cryptocurrency yabo, uthungelwano lokusingathwa kweefayile ezinatyisiweyo, iimarike ze-asethi yedijithali… amathuba aphantse angapheli.
Izipaji okanye iipaji
Ukuqala ukusebenzisana nehlabathi le-cryptocurrensets, udinga kuphela isiqwenga esincinci sesoftware, isicelo esisetyenziselwa ukufumana kunye nokuthumela le nto okanye le cryptocurrency. Izipaji, iipaji okanye iipaji ze-elektroniki zifunde iirekhodi zeBlockchain kwaye ubone ukuba ngawaphi amangenelo eAccounting anxulumene nezitshixo zabucala ezichongayo. Oko kukuthi, ezi zicelo "ziyazi" ukuba zingaphi iingqekembe ezizezakho. Ngokuqhelekileyo zilula kakhulu ukuzisebenzisa kwaye emva kokuba ezona nkalo zisisiseko zokusebenza kwazo kunye nokhuseleko ziqondwa, ziba yibhanki yokwenene kwabo bazisebenzisayo. Ukwazi ukuba isipaji sombane sisebenza njani kubalulekile ukujongana nekamva esele lilapha.
Ukwembiwa kwemigodi yindlela i-cryptocurrencies eyenziwa ngayo. Yingcamango entsha kodwa ebonisa ukufana okuthile kwimigodi yemveli. Kwimeko yeBitcoin, imalunga nokusebenzisa amandla ekhompyuter ukusombulula ingxaki yemathematika eyenziwe yikhowudi. Kufana nokuzama ukufumana igama lokugqitha ngokuzama ngokulandelelana iindibaniselwano zoonobumba kunye namanani. Xa, emva komsebenzi onzima, uyifumana, ibhloko yenziwa ngeengqekembe ezintsha. Nangona kungeyomfuneko ukwazi nantoni na malunga nemigodi ukusebenzisa i-cryptocurrencies, ngumbono omele uziqhelanise nawo ukuze ube nenkcubeko ye-crypto yokwenyani.
Ii-ICO, indlela entsha yeeprojekthi zokuxhasa ngemali
I-ICO imele i-Initial Coin Offing. Yindlela apho iiprojekthi ezintsha kwihlabathi leBlockchain zinokufumana imali. Ukwenziwa kwamathokheni okanye iimali zedijithali ezithengiswe ukuze zithengiswe ukuze kufumaneke izibonelelo zemali kunye nokuphuhlisa iiprojekthi ezintsonkothileyo okanye ezintsonkothileyo. Ngaphambi kokuvela kweteknoloji yeBlockchain, iinkampani zinokuzixhasa ngemali ngokukhupha izabelo. Ngoku ngokuqinisekileyo nabani na unokukhupha i-cryptocurrency yakhe ngethemba lokuba abantu baya kubona amathuba anomdla kwiprojekthi abafuna ukuyiphuhlisa kwaye bathathe isigqibo sokutyala imali kuyo ngokuthenga enye. Luhlobo lwe-crowdfunding, idemokhrasi yezibonelelo zemali. Ngoku kufikeleleka kumntu wonke ukuba abe yinxalenye yeeprojekthi ezinomdla nangona, kwakhona, ngenxa yokungabikho kwemimiselo, i-ICO inokuqaliswa iiprojekthi zayo zobuqhetseba obupheleleyo. Kodwa oko akungomqobo wokujika amehlo akho kwelinye icala; ithuba lokufumana imbuyekezo entle nokuba kutyalo-mali oluncinci lukhona. Kungumbandela nje wokufunda okungakumbi malunga nembono nganye kwezi. Kwaye apha siza kukuxelela eyona nto inomdla kuqala.